Apple inotangisa yechina beta yeIOS 11.3 | IPhone nhau
Runyerekupe rwekuti Apple inogona kuvhura iOS 11.3 mune yayo yekupedzisira vhezheni svondo rapfuura, yakazadzikiswa, saka zvaigona kunge zvichadaro vhiki ino. Asi zvinoita sekunge hapana, sezvo vakomana veCupertino vane vangori kusunungura yechina iOS 11.3 mushambadzi beta.
iOS 11.3 beta 4 inosanganawo neyechina beta yeTVOS 11.3 yeApple TV uye yechina beta ye macOS 10.13.4, vhiki mbiri mushure mekutanga beta yechitatu yeavo anoshanda masisitimu. Chinhu chitsva icho iOS 11.3 chichaunza kwatiri, inova iyo inonyanya kukosha kwatiri, iko mukana we shandisa kana kumisa kudzikisira kwesimba kwetemu yedu.
Iyi sarudzo yakauya kuIOS kubva paruoko rweIOS 10.2.1 isina kuita ruzha uye yakangozvitarisira kuderedza processor simba apo bhatiri rakanga risiri, sekureva kwaApple, mune yemaziso mamiriro uye nayo iyo vakomana kubva kuCupertino vaida kudzivirira yedu terminal kubva kudzima kana iyo bhatiri muzana yakaratidza zvinopesana.
Parizvino, uye mukushayikwa kwekutarisa nhau dzingangotiunzira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti beta 3 yeIOS 11.3 yakabvisa chero trace kune AirPlay 2, kunyangwe hazvo yaive iripo mumabheja maviri apfuura uye kuti inotibvumidza kuzvimiririra kudzora kubereka kwevakurukuri kana zvishandiso zvinoenderana neAirPlay.
Chimwe chitsva cheiyi vhezheni ndeye syncing mameseji neICloud, kuitira kuti zvishandiso zvese zvine chekuita neiyo chete ID zvive neese mameseji anotambirwa akazvimiririra pane yega yega kifaa. Iyi inotevera hukuru iOS inovandudza, yakagadzirisawo dambudziko remunhu wechiTelugu, ayo masvondo mashoma apfuura akakanganisa mamirioni emidziyo, zvichimanikidza Apple kuvhura chigadziriso icho chaive chisina kuronga kugadzirisa dambudziko iri, iOS 11.2.6 .XNUMX.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inotangisa yechina beta yeIOS 11.3
Spotify irikutadzisa mashandisiro emaapplication asina kubvumidzwa